ताराहरू के हुन्: विशेषताहरू र गठन | नेटवर्क मौसम विज्ञान
ताराहरू के हुन्?
धेरै पटक हामी आकाशमा हेर्छौं र आकाशमा ताराहरू अन्तरिक्षमा छरिएका देख्छौं। जहाँसम्म, त्यहाँ धेरै व्यक्ति छन् जो राम्ररी जान्दैनन् तारा के हो? वैज्ञानिक तरिकामा। हामी एउटा तारालाई धुलो र ग्यासको ठूलो क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गर्दछौं जुन हाम्रो ब्रह्माण्डलाई भेट्छ र त्यो आफैंमा चम्किन्छ। त्यो हो, यो एक ठूला गरमाउने तारा हो जसले आफ्नै प्रकाश दिन्छ र आकाशमा प्रकाशको बिन्दुको रूपमा देखा पर्दछ।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई तारा के हो, उनीहरूको मुख्य विशेषताहरू के हुन् र उनीहरू कसरी गठन हुन्छन् भनेर बताउन जाँदैछौं।
1 ताराहरू के हुन्?
2 ताराहरूको लक्षण
4 ताराहरू के हुन्: विकास
त्यहाँ आकाशीय शरीर को लागी उज्यालो हुनलाई चिनिन्छ र यसको आफ्नो उज्यालोपन हुन्छ। यसले न केवल प्रकाश तर ताप पनि सार्दछ। ताराहरूको ठूलो संख्याको कारण ब्रह्माण्डमा रहेको कुल संख्या ठ्याक्कै थाहा छैन। किनकि हामीलाई पनि ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण हदसम्म थाहा छैन, कति ताराहरू अवस्थित छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। यद्यपि, केहि सब भन्दा अनुभवी वैज्ञानिकहरूले ती मध्ये धेरैलाई पहिचान गरेका छन् र कूल प्रशस्तताको केही अनुमान गरेका छन्।
कुल संख्याको कल्पना गर्न कि आकाश अवस्थित छ हामी अझ परिष्कृत टेलिस्कोप प्रयोग गर्ने छौं। यस प्रकारको टेलिस्कोपहरूको साथ हामी पुग्न सक्दछौं दृश्यमान आकाशमा billion अरब भन्दा बढी ताराहरू अवलोकन गर्नुहोस्। यसले सिताराहरूको कुल संख्या सटीक हुनबाट धेरै टाढा बनाउँछ।
हाम्रो ग्रहको सबैभन्दा आहार सितारा मात्र एक हो जसले सौर्यमण्डल बनाउँछ। यो सूर्य को बारे मा छ। यो हाम्रो ग्रहमा जीवनको ग्यारेन्टी हो जुन हामीलाई थाहा छ। हाम्रो ग्रहको नजिकका अन्य ताराहरू प्रणालीमा पर्दछन् अल्फा सेन्टौरी 4.37 प्रकाश वर्षको दूरीमा अवस्थित छ।
एकचोटि हामीलाई थाहा भयो कि ताराहरू के हुन्, हामी तिनीहरूको विशेषताहरू जान्दछौं। तिनीहरू आकाशीय पिण्डहरू हुन् जुन मुख्यतया हाइड्रोजन र हीलियमले बनेका हुन्छन्। सामान्यतया sतिनीहरू प्रायः १ र १० अरब वर्ष बीचको हुन्छन्। तिनीहरूको गठन र उनीहरूका विशेषताहरूलाई दिँदै तिनीहरू ब्रह्माण्डमा एक समान वितरण हुने शरीरहरू होइनन्। सामान्यतया यी सबै ताराहरू सँगै आकाशगंगा बनाउन क्लस्टर हुन्छ। यी आकाशगंगाहरूमा तिनीहरू धुलो र ग्यास समावेश गर्दछन् र यो ताराको यो सबै समूह बनाउने कुरा हो।
त्यहाँ केहि अलग्गिएका छन् र अरूहरू जुन गुरुत्वाकर्षणको कारणले धेरै राम्ररी मिलाइएको छ। यी ताराहरू एक अर्कासँग मिलेर साँचो प्रणाली बनाउँदछन्। त्यहाँ केही ताराहरू छन् जुन बाइनरी छन्। यसको मतलब यो हो कि एउटा तारा २ साना ताराहरू मिलेर बनेको छ। त्यहाँ ताराहरूका धेरै समूहहरू छन्, हामी पनि देख्छौं कि त्यहाँ बहु प्रणालीहरू छन्। यी बहुविध प्रणालीहरूमा or वा अधिक ताराहरूको संरचना हुन्छ। यी प्रणालीहरू ट्रिपल, क्वाड्रपल, क्विन्टअपल आदि हुनसक्दछन्।
अर्को विशेषता यो हो कि तिनीहरूले आणविक फ्यूजन भनिने प्रक्रियाको नतीजाको रूपमा विकिरण उत्सर्जन गर्छन्। यो प्रक्रिया तब हुन्छ जब दुई हाइड्रोजन परमाणुहरू सँगै मिलेर नयाँ, भारी आणविक केन्द्रक बनाउँछन्। यो आणविक प्रतिक्रिया मानव र तिनीहरूको ऊर्जा गठन को लागी ठूलो चासोको हुनेछ। यद्यपि तिनीहरूको गठनको लागि ठूलो मात्रामा उर्जा र तापमान आवश्यक छ। यस प्रक्रियाको उत्पादनलाई ध्यानमा राख्दै, विद्युत चुम्बकीय विकिरणको उत्पादन र प्रकाश उत्सर्जन गर्न र उर्जा उत्पादन गर्न अनुकूल छ।
रंग तापमान र बाहिरीतम तहहरूमा निर्भर गर्दछ। चिसो ताराहरू, अधिक रातो यो देखा पर्छ। अर्कोतर्फ, ती तारा जुन तातो छनले निलो रंग दिन्छ। एक पटक हामीलाई थाहा छ कि ताराहरू के हुन्, हामीले थाहा पाउनुपर्दछ कि तिनीहरूको सुरू र अन्त छ। उनीहरूले बनाएको कुराले उनीहरूको कार्य पूरा गरे पछि केही अर्कोमा परिवर्तन हुन्छ। हामीले अगाडि उल्लेख गरिसक्यौं, सबैभन्दा सामान्य यो हो कि ताराहरू १ र १० अरब वर्ष बीचको छन्।
त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जो स्टारहरू के हुन् भनेर जान्दैनन्, तर कम मानिसहरूलाई थाहा छ कि उनीहरू कसरी गठन हुन्छन् र कसरी नष्ट हुन्छन्। अक्सर, यो ताराबाट उनको जन्म को बारेमा भनिन्छ, यदि यो एक जीवित प्राणी थिए। ताराहरूको गठन एक प्रक्रिया हो जुन सरल तरिकामा सारांश गर्न सकिन्छ। आकाशगंगा भित्र धुलो र ग्यासको बादलको अस्तित्व पछि, ताराहरू गठन हुन्छन्। धुलो र ग्यासको बादलहरू नेबुला हुन् जुन ब्रह्माण्डमा तैरिरहेका हुन्छन्। यदि एक नेबुला भित्र एक प्रकारको अशान्ति रहेको घटनामा, यदि अर्को नेबुलासँग टकरावको कारण, केही प्रकारको घटना देखा पर्दछ, रग्यास र धूलो तिनीहरूको आफ्नै गुरुत्वाकर्षण पुल अन्तर्गत पतन।
राम्रोसँग बुझ्नको लागि, तारा गठन गर्नको लागि, हाइड्रोजन, हीलियम, र स्टारडस्टले एक अर्कालाई आकर्षित गर्न सुरु गर्नु पर्छ। जब निहारिका घुम्छन्, यो सानो हुन्छ र यी तत्वहरूले एक अर्कालाई आकर्षित गर्दछ। यो हुने बित्तिकै, नेबुलाको केन्द्र उच्च घनत्व र उच्च तापमानको साथ हुन्छ। यो तब हो जब उनीहरू चम्किन्छन्। पतन प्रक्रियाको दौरान, नेबुलाले तातो कोर प्राप्त गर्दछ र यसको वरिपरि धूलो र ग्यास संकलन गर्दछ। कहिलेकाँही यस्तो हुन सक्छ कि केहि अवस्थित सामग्रीहरु ग्रहहरु, क्षुद्रग्रहहरु र अन्य आकाशीय निकाय बनाउँछ। तर, यदि केन्द्रमा सबै चीज उच्च तापक्रममा पुग्छ कि आणविक फ्यूजन हुन्छ र ऊर्जा जारी हुन्छ, एक तारा जन्मनेछ।
वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ कि तापक्रमको लागि आवश्यक छ एक सितारा १ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस को आसपास पैदा गर्न सकिन्छ। ताराहरू जुन जवान छन् र भर्खरै बनेका छन् प्रोटोस्टार्स भनिन्छ।
ताराहरू के हुन्: विकास
अन्तमा, हामीलाई ताराहरू के हुन् भनेर हामी पहिले नै जान्दछौं र हामी जान्दछौं तिनीहरूका विकास के हो। ताराहरूको जीवन चक्र तारकीय विकासको रूपमा चिनिन्छ। योसँग निम्न चरणहरू छन्:
प्रोटोस्टारहरू: यो एक हो जसमा यसको जन्म सुरु हुन्छ।
मुख्य अनुक्रममा स्टार: यो यसको परिपक्वता र स्थिरताको चरण हो।
यसले यसको केन्द्रमा हाइड्रोजन खपत गर्दछ: यहाँ आणविक फ्यूजन बन्द हुनेछ र न्यूक्लियस आफैंमा ढल्नेछ र तातो हुन थाल्छ। इभोल्युसनले विभिन्न मार्गहरू लिन सक्दछ तारको जनको आधारमा। तिनीहरू ठूला र अधिक विशाल छन्, छोटो जीवनभर छ।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं सिताराहरू के हुन् र उनीहरूका विशेषताहरूको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » ताराहरू के हुन्?